Giiftii Dureen Yunaaytid Isteetes Afrikaa Daw’achuu Itti Fufanii Jiru
Onkoloolessa 03, 2018
Malaniyaa Traamp daw’annaa Gaanaa keessatti kaleessa jalqaban itti fufuun gara Maalaawiitti imaluuf saganteeffatanii jiru.Gaanaa keessatti bakka dur daldallii Garbootaa gaggeeffamaa ture kan handaara galaanaa har’a daw’atan Malaaniyaan.
Jiraattonni magaalaa galama mootummaa Maalaawwii kan Lilingwee daw’annaa giiftii duree yunaaytid Isteetes kana hin beekan.Prezidaant Traamp biyyoota Afrikaa kan ilaaleen kan ammaan dura dubbatan daaw’annaa haadha warraa isaanii Kanaan kan haqamuu hin ta’u.
Maalaawwiin biyya hiyeeyyii keessaa tokko akkuma taate sagantaa gargaarsa Amerikaa irratti hirkattee jirti. Uummanni ishee Miliyoona kudha torba ta’u keessaa walakkaa caalaan jireenya hiyyumaa keessa jiru.
Imaltuun Malaaniyaa kun gara Keniyaa fi Masriitti kan itti fufuu ta’uun ibsamee jira.
Melaniyaa Traamp Daw’annaa Afrikaa Jalqaban
Sochiin Dimookiraasummaa Uummattoota Kibbaa Miseensoota Koree Hojii Rawwachiiftu 15 Filate
Somaaliyaa Keessatti Hidhattoota Al-shabaab Ajjefaman